Mabiko eBhaibheri eSukkot
Sukkot, Mutambo weMatumba, inguva ye "goho remichero yekutanga yemunda wako"; saka, inozivikanwa zvakare seChag Ha'Asif, Mutambo weKuunganidza. Izvi zvinogona kunzwisiswa padanho rechisikigo, remunhu uye renhoroondo. Munyika yepanyama, t ...
ne admin pane 21-02-06
Yakanyanya Mini Mini Greenhouse Kune avo vanofarira gadheni uye vanoda kutaridzika kwezvirimwa, iwe unozotsvaga nzira yekusvetsa imba yako navo kunyangwe zvodii. Kunyangwe iwe pamwe uchichengeta maruva muvhasi kana zvinwiwa padhuze nepahwindo mufurati rako, kana uine imba diki, unogona kunge uine ...
Yakachipa Pe Firimu Tunnel Greenhouse
ne admin pane 21-01-30
Yakachipa Pe Firimu Tunnel Greenhouse Nhasi, ndinoda kuunza yakachipa girobhuvhu-Pe yemuvhi tunnel greenhouse. Yakagadzirwa kubva kwenguva refu UV-yakadzikama, inorema-basa polyethylene, uyu mugero wakasimba uye wakasimba .Iyo yakavezwa simbi hoops haina ngura-chiratidzo uye inopinda muvhu nyore ...
Kutengesa Kwakanyanya - Moto Unodzivirira PVC Party Tende
Kutengesa Kwakanyanya -Fire Resistant PVC Party Tende Parizvino, yedu yepamusoro mutengesi ipisita moto PVC pato tende. Iyi tende yePVC pato haisi iyo yakajairika, nekuti moto unodzora waive wawedzerwa kune iyo PVC jira, iyo inosangana neNF P92-507 M2 standard yakapfuurwa neSGS. Pakuungana kana kuita mapato ...
Kutsva Kusvika-Famba muChicken Coop
New Arrival-Walk muChicken Coop Nhasi, ndinoda kuunza chigadzirwa chitsva - Famba muChicken Coop.Ichi chirongo chakanakira kuchengetedza huku dziri mumayadhi madiki uye makuru, kudzivirira huku kubva mukudzungaira, kuchipa mvura uye zuva kudzivirira uye kuchengeta huku dzakachengeteka kubva kumberi ...
Multifunctional Party Tende - Transparent Firimu Party Tende
Multifunctional Party Tende - Transparent Firimu Party Tende Nhasi, ini ndoda kuunza tende nyowani - yakajeka yeiyo firimu pati tende. Iyi tende rebato haringori chete nehunhu hwetende repati, asi zvakare rinogona kushandiswa sekufamba-mune girinhi. Naizvozvo, iri multifunctional ...
Zvimiro Uye Zvishandiso zveGreenhouse
ne admin pane 20-04-15
Zvimiro Uye Zvishandiso zveGreenhouse Greenhouse imhando yechigadzirwa icho chinoshandiswa zvakanyanya. zvigadzirwa zvine hukama uye zvinounza ...
Zvimiro Uye Zvishandiso zvePati Tende
Zvimiro Uye Zvishandiso zvePati Tende Bato tende rudzi rwechigadzirwa icho chinoshandiswa zvakanyanya. Ichi chigadzirwa chinogona kuratidza zvirinani kugona kwezvakaenderana zvigadzirwa uye kuunza yakawanda uye zvirinani rubatsiro kuhupenyu hwedu. Zvino ndeapi maficha uye tingaashandisa kupi. 1. Kushandisa Kwakasiyana-siyana Bato redu gumi ...
Zvekukurumidzira Zvinhu Kuti Uve Nani Dziviriro
Zvekukurumidzira Zvinhu Zvekudzivirira Kwako Zvirinani Dongtai Guta Winsom Kunze Chigadzirwa Chigadzirwa, Ltd. yakavambwa muna 2010. Sehunyanzvi hwekugadzira, fekitori yedu ine makore anopfuura gumi ruzivo rwekureba mumutsara uyu, nyanzvi mumhando dzakasiyana dzematende uye gazebos, zvakadai sebhajeti rebato tende, sukkah t ...